အမျိုးသမီးများအတွက် Anabolic Steroids- ဘယ်ဟာ အသုံးအများဆုံးလဲဆိုတာ ရှာဖွေပါ။ - ဘရာဇီး ဖြည့်စွက်စာ
အမျိုးသမီးများအတွက်ရောဂါဗေဒ - မည်သည့်အသုံးအများဆုံးကိုရှာဖွေပါ။
နိုဝင်ဘာလ 15, 2016 ဇန်နဝါရီလ 11, 2022
အမျိုးသမီးများအတွက် Anabolics- အန္တရာယ်များကား အဘယ်နည်း။
အမျိုးသမီးများသည်မည်သည့် anabolic steroids ကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြသလဲ။
Oxandrolone (Anavar သို့မဟုတ် Lipidex ဟုခေါ်သည်)
အမျိုးသမီးများအတွက် Post Cycle Therapy
Giants ဖော်မြူလာ - Anabolic Steroids အကြောင်းအားလုံးကို လေ့လာပါ။
Giants Formula ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
၏အသုံးပြုမှုကို ခန္ဓာဗေဒ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများအတွက် ဘရာဇီးတွင် အလွန်အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ လူတော်တော်များများ (အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ) သုံးပေမယ့် ဝန်မခံဘဲ ရလဒ်တွေကို အရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်တယ်လို့ သိထားပေမဲ့ တခြားသူတွေက စမ်းကြည့်ဖို့ ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ သန္ဓေတားဆေးသုံးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ရလာဖို့ ခက်ခဲတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကြွက်သားထုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့တွင် ပိုလျှံနေသော ပရိုဂျက်စတီရုန်း (အမျိုးသမီးဟော်မုန်း) ဟော်မုန်းများ ပါဝင်သည်။ အဆီ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ခက်ခဲစေသည်။ သွေးတိုးရောဂါ. ထို့ကြောင့်၊ အမျိုးသမီးအများအပြားသည် anabolic steroids ပါ ၀ င်သည်။ testosterone ဟော်မုန်း (ကျားဟော်မုန်း) ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ရလဒ်များကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည့်။ သို့သော် Testosterone ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အာနိသင်များမရှိဘဲ ရလဒ်ကောင်းများ ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည့် အစွန်းရောက်ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါသည်။
မည်သည့်ဓာတုပစ္စည်းကဲ့သို့ပင်၊ anabolic steroids အချို့ကိုပေးသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသို့သော် ၎င်းတို့ကို မှန်ကန်သောအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်သည် သို့မဟုတ် ရှောင်ရှားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၊ ဤဆောင်းပါးတွင် anabolic steroids အသုံးပြုခြင်းသည် အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်တွင် ဖြစ်စေနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် တုံ့ပြန်မှုများအကြောင်း သိလိုသမျှကို ဤဆောင်းပါးတွင် ပြောပြပါမည်။ သင်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အားကစားသမားတစ်ဦး သို့မဟုတ် ကာယဗလသမားတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပြီး လွန်ကဲသောဆုဖလားကို စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်သည် (အစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုး ကြွက်သား) သင်၏အလှအပကိုတိုးတက်စေရန်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးသမီးများအတွက် အသုံးအများဆုံး anabolic steroids များအကြောင်း ပြောသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင် တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ သံသရာ Steroids များ၏ ကျေနပ်ဖွယ်ရလဒ်များကို လျင်မြန်စွာနှင့် ဘေးကင်းစွာ ရယူပါ။
ဘာသာရပ်ကို သင်စိတ်ဝင်စားပြီး anabolic steroids များကို ကျန်းမာသောနည်းလမ်းဖြင့် အသုံးပြုနည်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာလိုပါက Giant's Formula တွင် ကြည့်ရှုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် သံသရာများအကြောင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော anabolic steroids များနှင့် သင့်ကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေသော အသုံးပြုနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
>>> ဖတ်ရန် Whey Protein - အနက်ရောင် ဦးခေါင်းခွံ
Anabolic Steroids များသည် သဘာဝ သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော ဟော်မုန်းများဖြစ်ပြီး အဆိုပါဟော်မုန်းများ လွန်ကဲပါက ဝက်ခြံများ (အမည်းစက်များနှင့် ဝက်ခြံများ) ကို တိုးလာစေနိုင်သည်။ ဆံပင်ဥပမာအားဖြင့်၊ အရည်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် သွေးပေါင်ချိန်တိုးခြင်း။ အမျိုးသမီးများတွင် အမျိုးသားများ ကိုလည်း ထိခိုက်စေသော အဆိုပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအပြင် အသံ နက်ရှိုင်းခြင်းနှင့် ဆံပင် ပမာဏ ပိုများခြင်း ကဲ့သို့သော အခြားသော တုံ့ပြန်မှုများလည်း ရှိသေးသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ. ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် clitoris ကို ကျယ်စေပြီး ဓမ္မတာမမှန်ခြင်း သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊ ရင်သားကို ကျဆင်းစေကာ အစာစားချင်စိတ်နှင့် libido ကို တိုးစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ anabolic steroids များသည် ဟော်မုန်းများဖြစ်သောကြောင့် အချို့သော အမျိုးသမီးများသည် အခြားသူများထက် ပိုသည်းခံကြသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့ကို ၎င်းတို့၏ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာများနှင့်အတူ ကိုးကားကြည့်ရအောင်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ အဓိက အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို လေ့လာနိုင်ပြီး သင့်လိုအပ်ချက်အရ သင့်သံသရာကို တည်ဆောက်နိုင်သည်-
အပြုသဘော- အန်ဒရိုဂျင် များများစားစား မရှိပါ၊ ဆိုလိုတာက အမျိုးသားဟော်မုန်း များများစားစား မရှိပါဘူး။ ၎င်းသည် သက်တမ်းတစ်ဝက်စာ ရှည်လျားသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် တာရှည်ခံသည်။
အနုတ်လက္ခဏာ- ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် အချိန်အတော်ကြာ တည်ရှိနေသောကြောင့် ဆိုးရွားသော တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါက ၎င်းတို့သည် ပျောက်ရန် အချိန်ပိုကြာပါသည်။
၎င်းသည် လူကြိုက်အများဆုံး anabolic steroid ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
အကောင်းမြင်ခြင်း- ကိုယ်အလေးချိန်ကို သိသိသာသာတိုးစေသည်။ ကြွက်သားထုထည်တက်သည်.
အနုတ်လက္ခဏာများ- အလယ်အလတ် အရည်ထိန်းသိမ်းမှုကို ဖြစ်စေပြီး ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ကြွက်သားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ ၎င်းသည် virilization ကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်သည် ၊ ဆိုလိုသည်မှာ မိန်းမကိုယ်တွင်း အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာသည် (ဥပမာ- ဆံပင်ကြီးထွားခြင်းနှင့် အသံနက်ရှိုင်းခြင်းကဲ့သို့) ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာစေသည်။
oxandrolone (Anavar သို့မဟုတ် Lipidex ဟုလူသိများ)
အပြုသဘောဆောင်သည်- ၎င်းသည် virilization တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသမီးများအသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။
>>> ဖတ်ရန် Ostarine: ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ ကြွက်သားထုထည်ကိုရယူပါ။
အနုတ်လက္ခဏာ- ဤဓာတ်သည် ပိန်သောထုထည်ကြီးထွားမှုကိုသာ ဦးစားပေးသောကြောင့်၊ လူများစွာသည် ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားသည်။
၎င်းကို အမျိုးသမီးများအတွက် အလုံခြုံဆုံး anabolic ဟု သတ်မှတ်ပြီး ပါးစပ် သို့မဟုတ် ထိုးသွင်းနိုင်ပြီး များသောအားဖြင့် အခြားသော anabolic steroids များနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
အပြုသဘော - အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
အနုတ်လက္ခဏာ- ရှာရအခက်ဆုံးဖြစ်ပြီး ဈေးအကြီးဆုံး စတီးရွိုက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြွက်သားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော ပါးစပ် သို့မဟုတ် ထိုးဆေးဗားရှင်းများတွင် ရောင်းချသော Anabolic။
အပြုသဘော- ခန္ဓာကိုယ်အဆီရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချရန် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
အနုတ်လက္ခဏာ- ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း၊ anabolic တစ်ခုစီတွင် အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာများ ပါရှိပြီး မည်သည့်အရာသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကို သင်၏တောင်းဆိုမှုဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါက၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာ, ခွန်အားကိုတိုးစေသည်။ ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်း (Bulking ဟုခေါ်သော လုပ်ငန်းစဉ်) သို့မဟုတ် လိုအပ်ပါက၊ ကိုယ်အလေးချိန်အဆီသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရရှိ ပိန်သည် (ဖြတ်တောက်ခြင်း) ဟုခေါ်သည်။
anabolic steroids (anabolic steroids သုံးတဲ့သူတွေ) တိုင်းဟာ သူတို့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကနေ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာ သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး Post Cycle Therapy အကြောင်း သင့်ကိုယ်သင် အသိပေးရန် အရေးကြီးသည် (TPC) သင်သတ်မှတ်သည့်စက်ဝန်းအတိုင်း မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ဆေးဝါးများသည် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရန်။
ယနေ့ဆောင်းပါးကို သင်နှစ်သက်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ အစီအစဉ်အသစ်များကို အကြံပြုရန် သင့်မှတ်ချက်ကို ချန်ထားခဲ့ပါ။
Anabolic steroids များသည် သံသယများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီး ၎င်းတို့ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ထုတ်ကုန်ကို မည်သူမျှမသုံးချင်ကြပါ။ လောလောဆယ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူအများအပြားသည် anabolic steroids များကိုအသုံးပြုနည်း၊ စက်ဘီးစီးနည်းစသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်ကြပြီး၊ အကြောင်းအရာအမှန်တကယ်နားလည်သူများအတွက် Giants' Formula မှသင်တန်းတစ်ခုအကြံပြုလိုပါသည်။
>>> ဖတ်ရန် Primobolan: ကြွက်သားများတိုးပွားလာမည်ဟုကတိပေးသောဤ steroid အကြောင်းကိုလေ့လာပါ။
The Giants' Formula သည် ဤထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကို မှန်ကန်စွာအသုံးပြုနည်းကို သင်ကြားပို့ချပေးမည့် အွန်လိုင်းသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသွင်အပြင်သုံးမျိုးဖြင့် အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
သင်အမှန်တကယ်ရလဒ်များရရှိစေရန် steroids ကိုအသုံးပြုရန်သင်ပေးပါ။
အားလုံးထက်၊ သင့်ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်စေဘဲ၊
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင်တန်းမှာ ဘယ်လိုသင်ရမလဲ အစာ သင့်အား ပိုမိုရလဒ်များရရှိစေမည့် စတီရွိုက်များနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက် စံပြဖြစ်သည်။
ဤသင်တန်းတွင် ebook ပုံစံဖြင့် module ခြောက်ခုပါရှိပြီး၊ သင်၏ဝယ်ယူမှုကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် အီးမေးလ်ဖြင့် သင်လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤပစ္စည်းအားလုံးအပြင်၊ သင်သည် သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနိုင်မည့် သင်တန်းဖန်တီးသူ Ricardo de Oliveira နှင့် သူ၏အဖွဲ့တို့လည်း ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
တရားဝင် Giants Formula စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
သင်တန်း module များမှာ-
Giants တွေရဲ့ Rationale
Formula dos Gigantes သည် လုံးဝအွန်လိုင်းလေ့ကျင့်ရေးပရိုဂရမ်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သော https://formuladosgigantes.com/ တွင်လည်း ပစ္စည်းအားလုံးကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အွန်လိုင်းသင်တန်းဖြစ်သောကြောင့်၊ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်နှင့် မကြာခဏဆိုသလို လိုအပ်သလို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန် အကြောင်းအရာကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက် မှန်ကန်သော steroids အသုံးပြုနည်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ ရှိပါသေးသည်။ ဒါကြောင့် အောက်ပါ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။
Tags:အမျိုးသမီး anabolicအမျိုးသမီးများအတွက် anabolicanavardecaစအို steroidsမင်္ဂလာပါသွေးတိုးရောဂါဒါပေမဲ့မိန်းမသံသရာလွန်ကုထုံးTPCအသုံးပြုခံ့